कसको ब्याट्री धेरै टिक्छ ? आइफोन कि सामसङ ? « Dhankuta Khabar
कसको ब्याट्री धेरै टिक्छ ? आइफोन कि सामसङ ?
समय : 5:17 AM
फेसबुकले परिवर्तन गर्यो यस्तो नियम : सत्यता नभएका पोष्ट गरे तुरुन्तै ब्लक गर्ने
यसरी गोरखाका १८ बर्षिय जोनले बनाएको रकेटको सफल परिक्षण !
यसरी बुटवलका युवा इन्जिनियर शिशिरले बनाए पानीबाट गाडी चलाउने उपकरण